Ukuba bucala / Imimmiselo yokusebenzisa |
ekhaya » Ukuba bucala / Imimmiselo yokusebenzisa
La magama alandelayo nemiqathango elawula bonke ngokusetyenziswa kwe-website coronationcasino.com zonke umxholo, iinkonzo kunye neemveliso ezikhoyo okanye kwiwebsite (ethatyathwe kunye, le Website). LeWebhu ezizequmrhu neziqhutywa uthweso Casino - GlobaliGaming (& Quot; kubekwa Casino & quot;). LeWebhu inikelwa ngokuxhomekeke uvume ngaphandle nenguqulo yonke imigaqo nemiqathango equlethwe apha kwaye zonke ezinye imithetho yokusebenza, imigaqo (dibene, ngaphandle komda, Bucala nkqubo kubekwa Casino ngayo) kunye neenkqubo ezinokuthi zipapashwe kumathuba ngamathuba kule Site ngokuthi uthweso Casino (ngokuhlangeneyo, i & quot; isiVumelwano & quot;).
Nceda funda esi siVumelwano ngocoselelo phambi kunikezelo okanye usebenzisa Website. Ngokungena okanye ukusebenzisa nayiphi na inxalenye site web, uyavuma ukuba babotshelelwe imiqathango kunye neemeko zesi sivumelwano. Ukuba awuvumi yonke imiqathango kunye neemeko zesi sivumelwano, ngoko ukufikelela Website okanye asebenzise naziphi na iinkonzo. Ukuba le mimiselo nemiqathango ingqalelo isithembiso yi uthweso Casino, sokwamkelwa ngokucacileyo ayiphelelanga kwezi meko. LeWebhu ifumaneka kuphela ngabanye abo ubuncinane 18 iminyaka ubudala.
Iakhawunti yakho coronationcasino.com and Site. Ukuba uyila blog / isiza kwi-Website, unoxanduva lokugcina ukhuseleko akhawunti yakho blog, kwaye unoxanduva ngokupheleleyo yonke imisebenzi zenzeka phantsi akhawunti namanye amanyathelo athatyathiweyo ngokunxulumene blog. Uze uchaze okanye abele kwikhompyutha kwi blog yakho ngendlela ekhohlisayo okanye ezingekho, kuquka ngendlela iinjongo zorhwebo igama okanye udumo kwabanye, kwaye kubekwa Casino ingatshintsha okanye ukususa nayiphi na inkcazo okanye igama ukuba iqwalasela ezingafanelekanga okanye ezingekho, okanye ngenye esingenakubangela uthweso Casino liability. Kufuneka kwangoko wazise kubekwa Casino nayiphi na imisebenzi engagunyaziswanga blog yakho, akhawunti yakho okanye nayiphi na enye iintanda zokhuseleko. Kubekwa Casino akayi kuba nabutyala ngayo nayiphi na nezenzo okanye ukungenzi nguWe, kuquka nawuphi na umonakalo naluphi na uhlobo ekungenwe kuyo ngenxa nezenzo okanye ukungenzi ezifana.
Luxanduva Contributors. Ukuba ukuqhuba blog, izimvo kwi blog, ngeposi imathiriyeli Website, ngeposi amakhonkco kwiZiko leWebhu, okanye ukwenza (okanye avumele nawuphi na umntu wesithathu ukwenza) izinto ezikhoyo ngokusebenzisa le Website (naziphi na izinto ezinjalo, & Quot; Umxholo & quot;), Luxanduva ngokupheleleyo ukulungiselela umxholo, nawuphi na umonakalo obangelwe, okungaphakathi. Oku kunjalo kungakhathaliseki nokuba ngaba zemixholo umbuzo eyenza kwisicatshulwa, yemizobo, ifayili yesandi, okanye software yekhompyutha. Ngokwenza Umba ofumanekayo, umele kwaye zifuna ukuba:
nokukotshwa, ukukopa nokusetyenziswa yoMxholo akayi zinyhasha amalungelo angawo, kuqukwa kodwa kungalinganiselwa copyright, patent, yophawu okanye urhwebo amalungelo emfihlekweni, nawuphi na umntu wesithathu;
Ukuba umqeshi wakho amalungelo kwipropathi uyila, ukuba mhlawumbi (mna) imvume ezivela kumqeshi wakho ukungathumeli okanye enze kufumaneke Content, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kulo naliphi na isoftware, okanye (ii) balinqabisa kumqeshi wakho ngorhoxiso ukuba onke amalungelo okanye Content;
ukuba kuyangqinelwana nazo naziphi mvume zeqela lesithathu enxulumene Content, kwaye wenze zonke izinto eziyimfuneko ukuze baphumelelayo ukuya ukuphelisa abasebenzisi nayiphi na imiqathango efunekayo;
yoMxholo ayiqulathanga okanye bafakelwe iintsholongwane, ziimpethu, isoftwe, amahashe etshabalalisayo okanye omnye umxholo eziyingozi okanye etshabalalisayo;
Okwakuthethwa ngenye, na umatshini- okanye ngokungacwangciswanga-generated, kwaye ayiqulathanga umxholo yorhwebo neenqobo ezisesikweni okanye engafunwayo eyenzelwe ukuqhuba kwezithuthi ukuya kwiziza zeqela lesithathu okanye kunyuswe kuluhlu enjini yokukhangela kweziza iqela lesithathu, okanye ezinye izenzo ezingekho (ezifana yobuqhetseba) okanye babala- abamkeli ukuba umthombo umbandela (ezifana spoofing);
yoMxholo na engamanyala, ayiqulathanga izisongelo okanye sivuselelane bubundlobongela abantu okanye amaziko, kwaye engaphazamisaniyo yabucala okanye sisaziwa amalungelo naliphi na iqela lesithathu;
na kokuba blog yakho zipapashwe ngokusebenzisa imiyalezo ngekhompyutha okungafunekiyo ezifana spam njengamakhonkco eendaba, uluhlu email, nezinye ii-blog kunye neewebhsayithi, kunye neendlela ezifanayo zokukhuthaza engamenywanga;
blog yakho nagama ngendlela ilahlekisa abafundi bakho ukuba bacinge ukuba omnye umntu okanye inkampani. Umzekelo, URL blog lakho okanye igama alikho igama lomntu ngaphandle ngokwakho okanye ngaphandle yakho kwinkampani; kwaye
unayo, kwimeko Content oluquka ikhowudi computer, ngokuchanekileyo yahlelwa yaye / okanye uchaze uhlobo, indalo, usebenzisa kunye neziphumo izinto, nokuba xa ecelwe ukuba enze njalo kubekwa Casino okanye ngenye.
Ngokufaka lokuqulethwe kubekwa Casino ukuze zifakwe kwi Website yakho, unikeza kubekwa Casino kwihlabathi-ngokubanzi, umnini-free, nelayisensi non-elilodwa lokuyivelisa, guqula, ukuziqhelanisa kwaye upapashe Content kuphela ngenjongo ngokubonisa, ibikukuwakhupha kunye nokukhuthaza blog yakho. Ukuba ucima Mxholo, Kubekwa Casino uya kusebenzisa iinzame ezifanelekileyo wasishenxisa ukusuka Website, kodwa siyazi ukuba omnye ukunyusa okanye izikhombisi kwi-Content ingabhengezwa ngokukhawuleza engafumanekiyo.
Ngaphandle umda naliphi imibono okanye iziqinisekiso, Kubekwa Casino unelungelo (nangona isinyanzelo) ukuze, ngokubona uthweso Casino ngayo (mna) ukwala okanye ukususa nawuphi na umxholo, ngokokubona elifanelekileyo uthweso Casino ngayo, eyaphula nawo nawuphi na umgaqo kubekwa Casino okanye nangayiphi na indlela eziyingozi okanye sibi, okanye (ii) ukunqumamisa okanye ukungakuniki nokusetyenziswa Website ukuba nawuphi na umntu okanye iziko ukuba nasiphi na isizathu, ngokubona uthweso Casino ngayo. Kubekwa Casino uya kuba akanyanzelekanga ukunika nembuyekezo nayiphi na imali ehlawulwa ngaphambili.
Ngokukhetha imveliso okanye inkonzo, uyavuma ukuhlawula kubekwa Casino ngexesha elinye-kunye / okanye imirhumo yaqho ngenyanga okanye ngonyaka kubonisiwe (ngokwemigaqo intlawulo eyongezelelweyo zingadityaniswa kwezinye unxibelelwano). Iintlawulo mrhumo uya kuhlawuliswa qho pre-pay ngosuku xa ungena, sihlaziywe, wagubungela ukusetyenziswa nkonzo ixesha yaqho ngenyanga okanye ngonyaka njengoko kubonisiwe. Ntlawulo ayibuyiswa.
Ngaphandle kokuba wazise kubekwa Casino phambi kokuphela kwexesha yorhumo esebenzayo ukuba ufuna ukucima yorhumo, yomrhumo wakho bahlaziye ngokuzenzekela kwaye segunya ukuqokelela intlawulo ngoko-esebenzayo wonyaka okanye wenyanga yorhumo enjalo (kwakunye nayiphi na irhafu) ukusebenzisa ikhadi ngetyala okanye njengendlela intlawulo enye sinayo ingxelo kuwe. Ukuhlaziywa anokurhoxiswa nangaliphi na ixesha ngokuthi angenise isicelo sakho kubekwa Casino ngembalelwano.
iintlawulo; intlawulo. Xa nokusayinela weeNkonzo akhawunti uyavuma ukuhlawula kubekwa Casino imirhumo setup esebenzayo kunye neentlawulo Kukusilela. imirhumo iya kuthunyelwa ukususela kwimini iinkonzo zakho ayamiselwa kwaye kwangaphambili zokusebenzisa iinkonzo ezifana. Kubekwa Casino balibambile ilungelo lokutshintsha imiqathango intlawulo nemirhumo phezu ezingamashumi (30) iintsuku phambi isaziso esibhaliweyo kuwe. Iinkonzo anokurhoxiswa nini nanini amashumi (30) seentsuku isaziso esibhaliweyo uthweso Casino.
inkxaso. Ukuba inkonzo yakho iquka ufikelelo ephambili email inkxaso. & Quot; inkxaso Email" kuthethwa ukuba nakho ukwenza izicelo zoncedo inkxaso yobugcisa nge email nangaliphi na ixesha (neenzame elifanelekileyo kubekwa Casino ukusabela ngaphakathi imini enye ishishini) ngokuphathelele ukusetyenziswa leeNkonzo VIP. & Quot; ePhambili" kuthetha ukuba inkxaso ebaluleke ngaphezu inkxaso abasebenzisi umgangatho okanye iinkonzo coronationcasino.com ivideo. Yonke inkxaso iya kunikwa ngokuhambelana kubekwa Casino ngeenkonzo ezisemgangathweni zokusebenza, iinkqubo kunye nemigaqo.
Uxanduva Website Iindwendwe. Kubekwa Casino ayikhange iwuhlole, kwaye ungakhe uzifumanele, zonke izinto, kubandakanywa isoftware yekhompyutha, ngeposi kwi-Website, kwaye, ngenxa yoko, kuba noxanduva umxholo lwezixhobo, ukusebenzisa okanye iziphumo. Xa usebenzisa Website, Kubekwa Casino awumeli okanye abonisa ukuba sigunyazisa ncwadi ngeposi, okanye ukuba ikholelwa ezo zinto ukuba ziyinyani, luncedo okanye non-eziyingozi. Unoxanduva ngokuthatha amanyathelo njengoko kuyimfuneko ukukhusela wena neenkqubo yakho kwikhompyutha ukususela iintsholongwane, ziimpethu, amahashe seTrojan, kunye nezinye iziqulatho eziyingozi okanye etshabalalisayo. LeWebhu singaqulatha umxholo leyo esisikhubekiso, engaphucukanga, okanye ayifanelekanga, kwakunye umxholo equlathe ukungalungelelani zobugcisa, iimpazamo yokuchwetheza, nezinye iimpazamo. LeWebhu kwakhona ziqulathe izinto okungqubana amalungelo zabucala okanye kuluntu, okanye esiphazamisa obunini propati kunye namanye amalungelo angawo, abangabanye, okanye nokukotshwa, ekopa okanye ukusetyenziswa apho kuxhomekeke umgaqo owongeziweyo nemiqathango, kuchazwe okanye unstated. Kubekwa Casino ukubanga uxanduva nawuphi na umonakalo obangelwe ukusetyenziswa iindwendwe kwi Website, okanye kuyo nayiphi na ngolayisho ngabo iindwendwe umxholo kukho ngeposi.
Umxholo Posted on Okunye Websites. Siye ayikhange iwuhlole, kwaye ungakhe uzifumanele, zonke izinto, kubandakanywa isoftware yekhompyutha, kufumaneka ngokusebenzisa sayithi kunye leweb apho coronationcasino.com amakhonkco, kwaye ngekhonkco coronationcasino.com. Kubekwa Casino akanalo naluphi na ulawulo phezu kwabo websites non-kubekwa Casino kunye leweb, kwaye ayinaxanduva ukuba imixholo okanye ukusetyenziswa kwazo. Beqhakamshela kwi website non-kubekwa Casino okanye icwecwe, Kubekwa Casino awumeli okanye abonisa ukuba huntshu kwi website okanye icwecwe. Unoxanduva ngokuthatha amanyathelo njengoko kuyimfuneko ukukhusela wena neenkqubo yakho kwikhompyutha ukususela iintsholongwane, ziimpethu, amahashe seTrojan, kunye nezinye iziqulatho eziyingozi okanye etshabalalisayo. Kubekwa Casino ukubanga uxanduva nawuphi na umonakalo obangelwe ukusetyenziswa lwakho non-kubekwa websites Casino kunye leweb.
Kwemveliso nkqubo DMCA. Njengoko kubekwa Casino kubuza abanye ukuba bahloniphe amalungelo obunini propati, oko oluhlonipha amalungelo obunini kushicilelo abanye. Ukuba ukholelwa ukuba izinto ibekwe okanye ezinxulumene yi coronationcasino.com kugxobha copyright yakho, uyakhuthazwa ukuba azise kubekwa Casino ngokungqinelana noMthetho Digital Millennium Copyright uthweso Casino ngayo (& Quot; DMCA & quot;) inkqubo. Kubekwa Casino uya kusabela zonke izaziso ezinjalo, kuquka njengoko kuyimfuneko okanye kufanelekileyo ngokususa izinto owonileyo okanye ikhubaze zonke iilinki nezinto wophula. Kubekwa Casino baya kuyiphelisa ufikelelo undwendwe ngayo nokusetyenziswa Website ukuba, phantsi kweemeko ezifanelekileyo, umtyeleli uzimisele ukuba lungaphindwa infringer ye abanamalungelo okanye amanye amalungelo obunini propati kubekwa Casino okanye abanye. Kwimeko sokunqunyanyiswa, Kubekwa Casino uya kuba akanyanzelekanga ukunika nembuyekezo naziphi na iimali ngaphambili ihlawulwe uthweso Casino.
I-intellectual property. Esi siVumelwano akuthethi ukutshintshela ukusuka kubekwa Casino kuni na kubekwa Casino okanye iqela lesithathu ipropati, yaye kulungile, itayitile nenzala kunye propati ziya kuhlala (njengoko phakathi kwamaqela) kuphela kunye kubekwa Casino. uthweso Casino, coronationcasino.com, ilogo coronationcasino.com, nazo zonke ezinye iimpawu, amanqaku inkonzo, yemizobo neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene coronationcasino.com, okanye Website ziimpawu zorhwebo okanye ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo kubekwa Casino okanye LAYISENISI uthweso Casino ngayo. Okunye zorhwebo, amanqaku inkonzo, yemizobo neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene Website isenokuba ziimpawu amanye amaqela esithathu. ukusetyenziswa ngayo Website unika ukuba akukho ekunene okanye ilayisensi lokuyivelisa okanye ngenye ukusebenzisa nayiphi kubekwa Casino okanye iimpawu zomntu wesithathu.
izaziso. Kubekwa Casino balibambile ilungelo ukubonisa iintengiso kwi blog yakho ngaphandle kokuba lathenga akhawunti ad-free.
imbeko. Kubekwa Casino linelungelo ukubonisa imbeko amakhonkco ezifana 'Blog apha coronationcasino.com,'Isihloko nombhali, kwaye imbeko befonti in okusemazantsi yakho blog okanye bar.
Iimveliso iqabane. Xa isebenze imveliso iqabane (umzk. umxholo) ukusuka kwenye namaqabane ethu, uyavuma ukuba ngokwemigaqo ukuba iqabane ngayo inkonzo. Uyakwazi Ungaphuma ngokwemimiselo yabo yenkonzo nangaliphi na ixesha de-nokusebenzisa imveliso iqabane.
Amagama Domain. Ukuba ubhalisa igama lethambeka, kusetyenziswa okanye iqiniselwe igama lethambeka ubhalisile ngaphambili, wena unengqiqo uyavuma ukuba ukusetyenziswa kwigama kwakhona ngokuxhomekeke kwimigaqo ye Internet Corporation for Amagama owabelwa neNumeri (& Quot; ICANN & quot;), kuquka abo Amalungelo Ubhaliso kunye noXanduva.
utshintsho. Kubekwa Casino balibambile ilungelo, ngokubona kwaso, ukuyiguqula okanye afakele ngokutsha nayiphi inxalenye yesi siVumelwano. Luxanduva lwakho ukujonga esi siVumelwano ngamaxesha utshintsho. Ukuqhubeka usebenzisa okanye ukufikelela kwi-Website emva kokufakwa naluphi na utshintsho kwesi sivumelwano senza ukwamkelwa kwabo utshintsho. Kubekwa Casino nazo, kwilixa elizayo, ukunikela iinkonzo ezintsha kunye / okanye iimpawu ngokusebenzisa Website (dibene, kokukhutshwa izixhobo ezitsha kunye nezibonelelo). iimpawu ezinjalo ezintsha kunye / okanye iinkonzo ziya kuxhomekeka imiqathango kunye neemeko zesi siVumelwano.
ukuphelisa. Kubekwa Casino usenokuliyekisa ukufikelela lwakho yonke okanye nayiphi na inxalenye Website nangaliphi na ixesha, kunye okanye ngaphandle kwesizathu, okanye ngaphandle kwesaziso, ukusebenza ngoko nangoko. Ukuba unqwenela ukusiphelisa esi siVumelwano okanye akhawunti yakho coronationcasino.com (ukuba unayo), ukuba angayeka ngokulula usebenzisa Website. Nangona umba, Ukuba une-akhawunti hlawula, akhawunti olo kupheliswe kuphela kubekwa Casino ukuba eziphathekayo wophula esi siVumelwano yaye sisilele ukunyanga solo kwisithuba ezingamashumi (30) iintsuku ukusuka kubekwa Casino xa isaziso kuwe yayo; kuxhomekeke ukuba, Kubekwa Casino angasiphelisa Website nangoko njengenxalenye wamvalela ngokubanzi phantsi inkonzo yethu. Onke amalungiselelo esi siVumelwano ethi ngobume babo kufuneka ukusinda nokupheliswa uya kusinda nokupheliswa, dibene, ngaphandle komda, amalungiselelo ubunini, disclaimers iwaranti, yembuyekezo kunye neentsilelo zobutyala.
Ukuzibhekelisa ye Warranties. LeWebhu inikwa & quot; njengoko i & quot;. Kubekwa Casino kunye nabaniki zayo LAYISENISI ngokwenjenje ibango ziqinisekiso zalo naluphi na uhlobo, okanye ezingachazwanga, dibene, ngaphandle komda, neziqinisekiso zokuthengiseka, nokufanela injongo ethile kunye non-mthetho. Akukho kubekwa Casino okanye abaxhobisi kunye LAYISENISI, yenza nawuphi na isiqinisekiso ukuba Website iya kuba mposiso okanye ukufikelela kulo ziya kuba eqhubekayo okanye olungaphazanyiswayo. Uyaqonda ukuba umxokozelo ukusuka, okanye ukufumana umxholo okanye iinkonzo ngokusebenzisa, le Website ngokubona yakho nomngcipheko.
Imida yemfanelo. Xa kungekho isiganeko uya kubekwa Casino, okanye kubathengisi okanye LAYISENISI, kuba nabutyala ngokubhekiselele kuwo nawuphi na umcimbi ophantsi esi sivumelwano phantsi nasiphi na isivumelwano, yokungakhathali, liability engqongqo okanye enye ingcamango yomthetho okanye nenobulungisa: (mna) nayiphi na eyodwa, umonakalo lihamba okanye esisiphumo; (ii) iindleko zokuthengwa iimveliso okanye iinkonzo ababambeleyo; (iii) ngenxa yophazamiseko ukusetyenziswa okanye ilahleko okanye ukumoshwa data; okanye (iv) naziphi na iimali ngaphezu kweefizi ehlawulwa ukuba kubekwa Casino phantsi kwesi sivumelwano ngexesha elinambini (12) ixesha kwinyanga phambi unobangela amanyathelo. Kubekwa Casino kuba akukho butyala ukusilela okanye ukulibaziseka ngenxa imicimbi ezingaphaya kolawulo lwabo elifanelekileyo. Ezi ayiyi kusetyenziswa kangangoko liyathintelwa ngumthetho osebenzayo.
Ukumelwa Jikelele Warranty. Wena yiba kwaye zifuna ukuba (mna) ukusetyenziswa ngayo Website ziya kuqhutywa ngokungqinelana ngqongqo kubekwa Casino bucala nkqubo, nesi sivumelwano kunye nayo yonke imithetho esebenzayo kunye nemimiselo (kuqukwa kodwa kungalinganiselwanga nayiphi na imithetho okanye imimiselo kwilizwe lakho, imeko, isixeko, okanye enye indawo karhulumente, ngokuphathelele ihambo intanethi kunye nesiqulatho eyamkelekileyo, yaye kuqukwa yonke imithetho esebenzayo malunga ukudluliselwa kwedata zobugcisa ngaphandle ukusuka eUnited States okanye ilizwe apho kuhlala) kwaye (ii) ukusetyenziswa ngayo Website akayi zinyhasha okanye misappropriate amalungelo obunini propati naliphi na iqela lesithathu.
okulolu. Uyavuma ukuba ubambe nibe uthweso Casino, oonokontraka baso, kunye LAYISENISI zayo, nabalawuli bazo, amagosa, abasebenzi kunye arhente, nangokuchasene onke amabango kunye neendleko, kubandakanywa imirhumo yamagqwetha, odalwa ukusetyenziswa ngayo Website, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga olwaphula kwakho kwesi siVumelwano.
Zomxube. Le IsiVumelwano isivumelwano lonke phakathi kubekwa Casino nani malunga nomba lwale, kwaye ukuze ziqwalaselwe kuphela zilungiso esibhaliweyo esisayinwe ngabalawuli eligunyazisiweyo uthweso Casino, okanye seposi ngokuthi kubekwa Casino we inguqulelo ehlaziyiweyo. Ngaphandle kangangoko umthetho osebenzayo, ukuba kukhona enye, ibonelela ngenye, esi siVumelwano, nawuphi na okanye ukusetyenziswa Website liya kulawulwa yi kwemithetho eNgilani naseWales, ngaphandle ungquzulwano yalo mthetho, kunye nendawo eyiyo ukuze naziphi neengxabano ezivela ngaphandle okanye malunga nayo nayiphi na enye iya kuba urhulumente kunye neenkundla Federal ibekwe London, UK. Ngaphandle amabango isiqabu injunctive okanye olulinganayo okanye amabango malunga amalungelo obunini propati (leyo enokuthi nayo nayiphi na inkundla efanelekileyo ngaphandle nokusiwa ngokuzikhanyeza), nayiphi na imbambano evela phantsi kwesi siVumelwano iya ekugqibeleni yoconjululwa ngokungqinelana ne-Comprehensive yoLamlo Imithetho yezeeJaji yoLamlo kunye neNkonzo Mediation, Inc. (& Quot; uyaxinga & quot;) yi balamle ezintathu abaqeshwe ngokuhambelana Imithetho efana. Ulamlo uya kuqhutywa London UK, ngolwimi IsiNgesi kwaye isigqibo arbitral sinokusetyenziswa kuyo nayiphi na inkundla. Iqela olukule nasiphi na isenzo okanye inkqubo ukunyanzelisa esi sivumelwano siza kuba nelungelo neendleko nemirhumo yamagqwetha. Ukuba nayiphi inxalenye yesi siVumelwano kubanjwa singasebenzi okanye singanyanzeliseki, ukuba inxalenye uya kuguqulwa ukubonisa amaqela 'injongo yantlandlolo, kwaye iinxenye eziseleyo iya kuhlala isebenza ngokupheleleyo nangokufanelekileyo. Ancame naliphi iqela nayiphi kwexesha okanye imeko kwesi siVumelwano okanye nakuphi na ukwaphulwa yayo, na umzekelo omnye, akayi kuncama ixesha okanye imeko okanye nakuphi na ukwaphulwa ngoqhubekekeko. Unokwabela amalungelo akho phantsi kwesi siVumelwano kuye nawuphi na umntu ukuba athande, kwaye uyavuma ukuba ubotshelelwe, ngokwemiqathango yalo kunye neemeko; Kubekwa Casino lingabela amalungelo phantsi kwesi sivumelwano ngaphandle imeko. Esi siVumelwano siyakubophelela phezu kwaye uya inure ukuze kuxhamle amaqela, ezihlangwini zabo nesinika kuvunyelwa.
uthweso Casino - GlobaliGaming ("uthweso Casino& Quot;) ngeentambozisebenzayo coronationcasino.com kwaye asebenze nezinye websites. Ngumgaqo-nkqubo kubekwa Casino ukuba ahlonele inkululeko yakho malunga naluphi na ulwazi sinokuqokelela ngelixa Website.
Njengoninzi website abaqhubi, Kubekwa Casino uqokelela non-ngokobuqu-ukuchonga ulwazi olufana bencwadi be web nabancedisi ngokokuqhelekileyo enze kufumaneke, ezifana nohlobo umkhangeli, ulwimi olukhethwa, site wayebhekisela, kunye nomhla nexesha isicelo ngasinye undwendwe. injongo kubekwa Casino xa nokuqokelela iinkcukacha non-ngokobuqu nokuchonga kukuba siqonde ngcono ukuba iindwendwe kubekwa Casino zisebenzisa website yayo. Ngamaxesha ngamaxesha, Kubekwa Casino inikhululele non-ngokobuqu-nokuchonga ulwazi kumndilili, e.g., ngokuthi apapashe ingxelo zokuqhubekayo ukusetyenziswa website yayo.
Kubekwa Casino kwakhona uqokelela ezinokuba ngokobuqu-nokuchonga ulwazi ezifana iProtkholi ye-Intanethi (IP) iidilesi loga abasebenzisi kubasebenzisi eshiya izimvo blogs coronationcasino.com / amaziko. Kubekwa Casino kuphela uyityhilelayo loga iidilesi lomsebenzisi kunye commenter IP phantsi kweemeko ezifanayo ukuba isebenzisa kwaye ayityhilele ngokobuqu-nokuchonga ulwazi njengoko kuchaziwe ngezantsi, ngaphandle ukuba iidilesi commenter IP needilesi ze email iyabonakala kwaye ityhilwe abalawuli le blog / kwisiza apho izimvo wasala.
Ntlanganiso Umntu-Ukuchonga ulwazi
iindwendwe ezithile websites kubekwa Casino bakhetha ukusebenzisana kubekwa Casino ngeendlela ezifuna kubekwa Casino ukuqokelela ngokobuqu-nokuchonga ulwazi. Isixa nohlobo ulwazi kubekwa Casino uhlanganisa ixhomekeke kuhlobo intsebenziswano. Umzekelo, sicela iindwendwe basayinileyo phezulu coronationcasino.com ukubonelela lomsebenzisi kunye email idilesi. Abo babandakanyeka transactions kubekwa Casino bacelwa ukuba ukunika ulwazi olongezelelweyo, kubandakanywa njengoko kuyimfuneko iinkcukacha buqu nezemali ezifunekayo ukwenza loo transactions. Kwimeko nganye, Kubekwa Casino uqokelela ulwazi ngamaxesha kuphela njengoko kuyimfuneko okanye kufanelekileyo ukuzalisekisa injongo intsebenziswano undwendwe kunye uthweso Casino. Kubekwa Casino ayiyichazi ngokobuqu-nokuchonga ulwazi ngaphandle njengoko kuchaziwe ngezantsi. Neendwendwe ungasoloko ale ukuxela ngokobuqu-nokuchonga ulwazi, kunye icaveat ukuba kunokukhusela ukuba bazibandakanye kwimisebenzi ethile enxulumene-website.
Kubekwa Casino sinokuqokelela iinkcukacha malunga nokuziphatha kwabatyeleli kwiwebhusayithi. Kubekwa Casino iveze olu lwazi esidlangalaleni okanye ukunika abanye. nokuba, Kubekwa Casino ayiyichazi ngokobuqu-nokuchonga ulwazi ngaphandle njengoko kuchaziwe ngezantsi.
Ukhuseleko ezithile Iinkcukacha Umntu Ukwazi
Kubekwa Casino ayityhilele ezinokuba ngokobuqu-ekuchongeni kwaye ngokobuqu-nokuchonga ulwazi kuphela kwabo abasebenzi balo, iikontraki kunye nemibutho namaziko ukuba (mna) kufuneka bazi ukuba ulwazi ukuze siyinika egameni kubekwa Casino okanye ukubonelela ngeenkonzo ezikhoyo websites uthweso Casino ngayo, kwaye (ii) ukuba bavumile ukuba uluxele kuye kwabanye. Ezinye abo basebenzi, iikontraki kunye nemibutho amanyeneyo inokufunyanwa ngaphandle kwilizwe lakowenu; ngokusebenzisa websites uthweso Casino ngayo, uyavuma kukhutshelo ezo nkcukacha kubo. Kubekwa Casino uya ingakrazuki okanye athengise ezinokuba ngokobuqu-ekuchongeni kwaye ngokobuqu-nokuchonga ulwazi nakubani. Ngaphandle ukuba abasebenzi balo, iikontraki kunye nemibutho amanyeneyo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, Kubekwa Casino ayityhilele ezinokuba ngokobuqu-ekuchongeni kwaye ngokobuqu-nokuchonga ulwazi kuphela ukuphendula isamani, umyalelo wenkundla okanye enye isicelo karhulumente, okanye xa kubekwa Casino ukholelwa ngokholo ezilungileyo ubhengezo kunyanzelekile ukukhusela ipropati okanye amalungelo uthweso Casino, amaqela esithathu okanye uluntu ngokubanzi. Ukuba umsebenzisi obhalisiweyo iwebhusayithi kubekwa Casino baza kunikwa idilesi yemeyile yakho, Kubekwa Casino Maxa wambi kuthumela imayile ukukuxelela malunga emitsha, ukufumana ingxelo yakho, okanye ukugcina nje ukuba ungathandana kwenzekantoni kunye kubekwa Casino nemveliso yethu. Ukuba uthumela ukuba isicelo (umzekelo nge email okanye ngenye kweendlela zethu ingxelo), sinalo ilungelo ukuba kushunyayelwe ukuze kusinceda ukucacisa okanye uphendule isicelo sakho okanye ukusinceda ukuxhasa ezinye abasebenzisi. Kubekwa Casino kuthatha onke amanyathelo kunyanzelekile ukukhusela ngokuchasene ufikelelo olungagunyaziswanga, ukusebenzisa, ukutshintshwa okanye ukutshatyalaliswa ezinokuba ngokobuqu-ekuchongeni kwaye ngokobuqu-nokuchonga ulwazi.
A cookie umtya ulwazi ukuba igcina website kwikhompyutha undwendwe ngayo, kwaye umkhangeli umtyeleli linikela kwiwebhusayithi ixesha ngalinye undwendwe returns. Kubekwa Casino isebenzisa cookies ukunceda kubekwa Casino ukuchonga nokulandela iindwendwe, ukusetyenziswa zabo website uthweso Casino, kwaye website abazithandayo ukufikelela. iindwendwe kubekwa Casino abangakunqweneliyo ukuba cookies zibekwe kwiikhompyutha zazo kufuneka ungacwangcisa kwabakhangeli zabo ukwala cookies phambi kokusebenzisa websites uthweso Casino ngayo, kunye drawback ukuba iimpawu ezithile websites kubekwa Casino akuvumelekanga ukusebenza kakuhle ngaphandle kokusebenzisa cookies.
Ukuba kubekwa Casino, okanye kakhulu zonke iimpahla zaso, ziye zafunyanelwa, okanye Kwimeko engalindelekanga yokuba kubekwa Casino uya ngaphandle ishishini okanye ungena tyhil'indlela, ulwazi lomsebenzisi kuba yenye yezinto othe wasiwa okanye ezifunyenwe wesithathu. Uyakuvuma ukuba udluliselo esinokubakho, kunye nokuba naluphi na uyinikezelwayo of kubekwa Casino zingaqhubeka zisebenzise iinkcukacha zakho njengoko eziqulathwe kule nkqubo.
Iintengiso ebonakala nayiphi kwiiwebhusayithi zethu ukuze ndihlangulwe kubasebenzisi ngamaqabane zentengiso, abangazukumisa cookies. Ezi cookies kuvumela umncedisi ad ukuze siqaphele ikhompuyutha yakho qho bekuthumela isibhengezo online ukuqokelela ulwazi malunga nawe okanye abanye abasebenzisa ikhompyutha yakho. Le ngcaciso ivumela inethiwekhi zentengiso, ukuba, phakathi kwezinye izinto, kubahlangula iintengiso ekujoliswe abakholelwa ukuba ziya kuba yeyona umdla kuwe. Le bucala nkqubo ibandakanya ukusetyenziswa iikuki kubekwa Casino, akawuvingca ukusetyenziswa cookies nawuphi umthengisi.
Utshintsho nkqubo wabucala
Nangona uninzi tshintsho kusenokwenzeka ukuba ezincinane, Kubekwa Casino ingatshintsha nkqubo Wabucala amaxesha ngamaxesha, kwaye ngokwelungelo uthweso Casino ngayo. Kubekwa Casino ikhuthaza iindwendwe ukukhangela rhoqo kweli phepha ukuze naluphi na utshintsho nkqubo Wabucala. Ukuba une-akhawunti coronationcasino.com, unokude kufumana kodityaniso sikwazise wena kwezi tshintsho. Ukuqhubeka usebenzisa le ndawo emva naluphi na utshintsho kwesi bucala nkqubo kuya sokwamkela ngolo tshintsho.
Kubekwa Casino ke awananto nayiphi othile kwiikumkani. Kumnandi e kubekwa Casino!